September 2021 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 Sep 30, 2021 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay …
cusmaan	 Sep 30, 2021 0
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, maktabkeeda Siyaasadda iyo xiriirka Wilaayaatka ayaa isbadal ku sameeyay Wilaayada Islaamiga ah ee Baay iyo Bakool. Shir weyne ay kasoo qaybgaleen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa lagu…
Kamiin Saraakiil Sare ay ku waxyeelloobeen Oo ka dhacay Shabeellaha Hoose.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku waramaya in weerar kamiin ah oo aad u culus loo dhigay ciidamo katirsan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Gorgor lagu magacaabo, islamarkaana hoostaga dowladda Turkiga. Kolonyo ay…
Sarkozy Oo Mar Labaad Lagu Xukumay Hal Sano Oo Xabsi Guri Ah.
Wararka naga soo gaaraya dalka Faransiiska ayaa waxay ku waramayaan in maanta maxkamadda sare ee waddankaas ay xukun hal sano oo xabsi guri ah ay ku riday madaxweynihii hore ee dalkaas Nicolas Sarkozy. Sarkozy ayaa waayahaan danbe wuxuu…
Wasiirka Arrimaha Dibadda Ee Maamulka Yahuudda Oo Booqasho Ku Tegay Baxreyn.
Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Maamulka Yahuudda Yair Lapid ayaa booqasho rasmi ah ku tagay dalka Baxreyn, waana booqashadii ugu horeysay oo mas’uul sare oo ka tirsan Maamulka Yahuudda ku tago dalkaas tan markii labada dhinac uu dhexmaray…
Dhegeystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta Waa Khamiid ,Taariikhda hijriguna waxay ku…
Al-Kataa’ib oo baahisay Xalqo lagu faaqiday Xeerka Ciqaabta Soomaaliyeed. (Warbixin)
Waa xalqada todobaad ee taxanaha Saa’a Maa Yaxkumuun oo ay mu’assasada Al-Kataa’ib ku faaqido dastuurka Dowladda federaalka ay ku dhaqanto, dooneysana iney ka hirgeliso guud ahaan Soomaaliya. Xalqadan waxaa looga hadlayo qodoba kamid ah…
Ciidamo katirsan Ilaalada Garoonka Diyaaradaha Baydhabo oo la dilay. (Dhagayso)
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gelinkii dambe ee maalintii shalay waxay weerar ka fuliyeen duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo. Weerarka waxa uu ahaa mid aad u culus oo la isku adeegsaday hubka…
In kabadan 40 Yahuud Ah Oo Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqday Shil ka Kacay Waqooyiga Falastiin.
Sida laga soo xigtay warbaahinta Yahuudda ugu yaraan 5 ruux oo Yahuud ah ayaa ku dhimatay 39 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo fiidnimadii xalay ka dhacay meel u dhow deegaanka Jaliil oo ay xoogga ku haysato Yahuudda dhul boobka ah…
Itoobiya Iyo Tigre oo Guulo Ka Kala Sheegtay Dagaallo Ka Dhacay Dalkaas.
Dagaalo culus ayaa 24kii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya kuwaasoo dhex maray ciidanka xukuumadda Adis-ababa oo garabsanaya kuwa xukuumadda Asmara iyo malleyshiyaadka qowmiyadda Amxaarada iyo ciidanka Tigree oo…